Badalelwa ntoni abantu? Ngaba ubomi buphelele apha? | Iimpendulo Zemibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCakchiquel (Sakumbindi) IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisi IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLamba IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUruund IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
Ngaba ukhe ubone ngathi ubomi bufutshane kakhulu?
Ngaba wakha wacinga ukuba ubomi abuphelelanga nje ekudlaleni, ekusebenzeni, ekutshateni, ekukhuliseni intsapho nasekwaluphaleni? (Yobhi 14:1, 2) IBhayibhile iyasibonisa ukuba nabona bantu balumkileyo bakhe bacinge ngale nto.—Funda iNtshumayeli 2:11.
Ngaba ubomi bunenjongo? Kuqala, simele sizibuze, Baqala njani ubomi? Emva kokucingisisa kakuhle ngendlela emangalisayo eyenziwe ngayo ingqondo nomzimba wethu, abaninzi baye bagqiba kwelokuba kukho uMdali osisilumko owasidalayo. (Funda iNdumiso 139:14.) Ukuba kunjalo, umele ukuba wasidala ngenjongo! Ukwazi loo njongo kunokusenza sibunandiphe ngakumbi ubomi.
Badalelwa ntoni abantu?
UThixo wabasikelela abantu bokuqala, waza wabanika umsebenzi owonwabisayo. Injongo yakhe yayikukuba bawuzalise umhlaba, bawenze iparadesi baze baphile kuwo ngonaphakade.—Funda iGenesis 1:28, 31.
Injongo kaThixo yalibaziseka xa abantu bavukela ulawulo lwakhe. Kodwa akazange asincame, okanye atshintshe injongo yakhe. IBhayibhile iyasiqinisekisa ukuba uThixo uzimisele ukubasindisa abantu abathembekileyo, ibe injongo yakhe ngomhlaba iza kuzaliseka! Ngoko uThixo ufuna uphile ngendlela awayekudalele ukuba uphile ngayo! (Funda iNdumiso 37:29.) Funda eBhayibhileni ngoko umele ukwenze ukuze ungenelwe kwinjongo kaThixo.